engine - Synonyms of engine | Antonyms of engine | Definition of engine | Example of engine | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for engine
Top 30 analogous words or synonyms for engine
စက်မှု အင်ဂျင် (Engine)
ဓာတ်ဆီ Engine) ခေါ်ပါတယ်။
ဆာဂေး ဘရင် ၂၀၀ဝ ခုနှစ်တွင် Webby Award နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှု အတွက် People’s Voice Award ကို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Outstanding Search Service ဆု၊ Best Image Search Engine ဆု၊ Best Design ဆု၊ Most Webmaster Friendly Search Engine ဆု နှင့် အကောင်းဆုံး ရှာဖွေနိုင်သော အင်္ဂါရပ်အတွက် Search Engine Watch Award တို့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
Yahoo! BOSS Yahoo! BOSS (Build Your Own Search Service) ဟာ Web Service တစ်ခုဖြစ်ပြီး။ Developer နဲ့ Companies တွေ အနေနဲ့ Yahoo! ရဲ့ Search Engine မှာ သုံးတဲ့ နည်းပညာ တွေကို သုံးပြီး လိုသလို ပြုပြင်၊ ဆင့်ပွား ဖန်တီးထားတဲ့ (Web-Scale) Search Engine တွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ The engine made its first flight aboardaGotha Go 145 on 30 April 1941.
ဂူဂယ် အစပိုင်းတွင် သူတို့၏ search engine ကို BackRub လို့ အမည်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုဒ်တစ်ခု၏ အရေးပါမှုကို သူ့ကို ရည်ညွှန်းထားတဲ့ backlinks တွေပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်း သတ်မှတ် ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းမတိုင်မီက ထိုနည်းစနစ်ကို သုံးထားသော Rankdex အမည်ရှိ search engine တစ်ခု ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်သည် သီးစစ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း ဂူဂယ် ဖြစ်လာမည့် search engine အတွက် အခြေခံများ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် သူတို့ search engine ၏ လိပ်စာသည် စတန်းဖို့ဒ် ယူနီဗာစီတီ၏ subdomain တစ်ခုဖြစ်သော google.stanford.edu အနေဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ google.com ဒိုမိန်း ကို ၁၉၉၇ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်မှ မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် Google Inc. ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ ကားဂိုထောင်ထဲတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို စတင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ငွေ အရင်းအနှီးကို Sun Microsystems ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Andy Bechtolsheim က ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ တန် ချက်လက်မှတ်တစ်ခု စတင် ထုတ်ပေးရာမှ အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ပါဝင်လာပြီး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်းအထိ တိုးတက်များပြားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆာဂေး ဘရင် အဓိက စဉ်းစားပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဆန်းသစ်တိုးတက်မည့် အလားအလာရှိသည့် လေ့လာမှုတခုကို “ လိုအပ်ချက်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်သည့် အကြီးစား အင်တာနက် search engine တခု ၏ တည်ဆောက်ပုံ” ဟုအမည် ပေးကာ အတူတကွ ရေးသားခဲ့သည်။
Yahoo! BOSS Yahoo! BOSS ဟာ Yahoo! ရဲ့ Search Index တွေအားလုံးကို programmatically ဝင်ရောက်ရှာ ဖွေနိုင်တဲ့ Application Interface (API) ဖြစ်ပါတယ်။ Developer တွေ အနေနဲ့ လည်း Yahoo! ရဲ့ အဆင့်မီ Search နည်းပညာ တွေကို သုံး၊ မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ Information တွေထည့်ပေါင်းကာ (Customized) Search Engine ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ချို့ company တွေရဲ့ Search Engine မဖန်တီးနိုင် မှုအခက်ခဲ ကြောင့် နှောင့်နှေး နေတာတွေကို ကျော်လွှား စေနိုင်ပါတယ်။